माछापुुच्छ्रे बैंकद्वारा ब्राण्ड एम्बेसडर नियुुक्त
काठमाण्डौं, भदौ ३
माछापुच्छ्रे बैंकले व्यावसायिक प्रवद्र्धनको लागि ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ । बैंकले नियुक्त गरेका ब्रान्ड एम्ब्यासडरहरुलाई पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले खेलकुद क्षेत्रका उदीयमान नामहरु मिरा राई, प्रतिमा शेर्पा र आर्यन गिरीलाई बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा नियुक्त गरेको हो । बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मिरा राई, प्रतिमा शेर्पा र आर्यन गिरीले क्रमशः आफ्नो यात्रा, कठिनाइ एवं चुनौतीहरु, सफलताहरु र भावी योजनाहरुबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । मिरा राई नेपाली म्याराथनको एक चर्चित नाम हो । विभिन्न अल्ट्रा म्याराथन खेलमा सहभागिता जनाइसकेकी मिरा राईले देश र विदेशमा थुप्रै उपाधि जितेकी छिन् । राईले २०१५ मा फ्रान्समा सम्पन्न ८० किलोमिटर विश्व म्याराथनमा पहिलो स्थान हासिल गरेकी थिइन् । विश्व अल्ट्रा म्याराथनमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएकी धाविका मिरा राईले नेसनल ज्योग्राफिकले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एड्भेन्चर अफ द इयरको उपाधि समेत जितेकी थिइन् । त्यसैगरी प्रतिमा शेर्पा नेपालको नम्बर १ महिला गल्फर हुन् । रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुुर्किएकी शेर्पाले १५ वर्षकै उमेरदेखि खेलको प्रशिक्षण लिएकी हुुन् । सानो उमेरमै लगातार उपाधि जित्न सफल भएपछि उनको चर्चा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी मिडियामा पनि भएको थियो । उनले पूर्व विश्व नं. १ टाइगर उड्सलाई समेत भेट्ने अवसर प्राप्त प्राप्त गरेकी थिइन् ।
उनको दुई महिने अमेरिका भ्रमणका दौरान ईएसपीएनले उनीमाथि एक वृत्तचित्र समेत निर्माण गरेको थियो । बैंकका अनुसार आर्यन गिरी अर्का १३ वर्षीय उदीयमान टेनिस खेलाडी हुन् । छ वर्षको कलिलै उमेरदेखि टेनिस सुरु गरेका गिरी बर्न सर्भाइभर हुन् । उनले नेपाल अन्डर १४ को नम्बर १ र एशिया अन्डर १४ मा नम्बर २९ स्थान बनाउन सफल खेलाडी हुन् । उनले आफ्नो मिहिनेत र परिश्रमले एसियाकै नम्बर १ हुने लक्ष्य राखेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले मिरा राई, प्रतिमा शेर्पा र आर्यन गिरीजस्ता खेलाडीहरुलाई बैंकसँग आबद्घ गर्न पाउनु गौरवको विषय रहेको बताए । बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद् डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले समेत बैंकले नियुक्त गरेका ब्रान्ड एम्बेसडरहरुले बैंकलाई अझै उचाइमा पु-याउने बताए । बैंकका अध्यक्ष रोशन के.सी.ले पनि मिरा राई, प्रतिमा शेर्पा र आर्यन गिरीलाई माछापुच्छ्रे बैंकको सदस्यका रुपमा स्वागत गरे । बैंकले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर साथै हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म आफ्ना ८६ वटा शाखाहरु, दुुईवटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरुलगायत २५ शाखारहित बैंकिङ सेवा समेत गरी जम्मा एक सय १३ स्थानबाट ग्राहक महानुभावहरुमा सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, बैंकको देशभर ९९ वटा एटीएमहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।